Home Wararka (Daawo) “Farmaajo wuxuu isku dayay in ciidan Eriteriyaan ah lagu bedelo kuwa...
MW Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa codsaday in Ciidanka Nabad Ilaalinta AMISOM ee ka socda Kenya laga saaro Somalia, wuxuuna codsaday in lagu bedelo ciidama ka socda Dalka Ereteriya sida uu sheegay sarkaal ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka.
“Madaxweynaha Somalia Maxamed Farmaajo ayaa ku hanjabay in Ciidanka Kenya laga saarayo Somalia laguna bedelayo ciidanka Eriteriya, balse sida ku qoran heshiiska lagu dhisay ciidanka Nabad ilaalinta AMISOM Dowladda Soomaaliya awood uma laha in aay waxbedesho ciidan ka howlgala Somalia oo ka tirsan AMISOM” Ayuu yiri.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si walba isku dayaya in Jubbaland aay soo gasho gacantiisa, wuxuuna horey ugu fashilmay in Ciidanka Kumaandooska Itoobiya aay u qabtaan Axmed Madoobe, balse waxaa diiday ciidanka AMISOM ee Kenya in aay diyaaraddii siday ciidanka Itoobiya aay ka soo degto magaalada Kismaayo.
MW Farmaajo ayaa heshiis uu la galay RW Itoobiya Abiye Axmed wuxuu u ballan qaaday in Itoobiya aay isticmaali doonto isla markaana maalgashan doonto dekedda Kismaayo isagoo ku bedeshay in Itoobiya & Eriteriya aay ku hayaan xukunka.
Halka Hoose ka daawo muuqaalka Diblomaasiga Mareykanka ah ee ka hadlay damaca Farmaajo uu ku doonay in ciidan Eriteriya ka socda la keeno Somalia.